Ihe Bible Pụtara | January 2022
mgbazinye ego na -enweghị nkwenye kredit
ekwentị m ka bidoro onwe ya
ihe na -adọrọ mmasị ị ga -agwa enyi gị nwanyị
bụ iphone 11 chaja ikuku
AMỤMA NA IHE MMỤỌ NKE OWLS
Amụma ikwiikwii amụma na nke mmụọ, Gịnị ka ikwiikwii na -anọchi anya ya?.
Ihe Baibul pụtara nke oke na nrọ
Ihe Baibul pụtara nke oke (oke) na nrọ. Akara oke na -abanye na nrọ gị pụtara ihe adịghị mma na -aga ime. N'ime ụwa ime mmụọ
IHE BAỊBỤL PỤTARA ỊHỤ ỌRỤ
Gịnị ka ịhụ akwụkwọ nsọ pụtara na Baibul? Hawk anụmanụ totem, Hawk pụtara mmụọ. Ha bụkwa ihe nnọchianya nke amamihe, nghọta, ọhụụ, mgbakasị ahụ
Uche Pụtara na Bible ?. Agba ojii na ọcha nwere agba pụtara. Ịchọtala nku mgbe ị na -aga ije? Ọ bụrụ otu a, ndị mmụọ ozi na -ezipụ ozi na ndụ gị.
Gịnị bụ nanị nkịta a kpọtụrụ aha kpọmkwem n'ime Bible?
Greyhound n'ime Bible. Nanị ụdị nkịta aha ya dị na Bible bụ greyhound (Ilu 30: 29-31, King James Version):
IHE SAPPHIRE PỤTARA NA BAỊBỤL
Sapphire nkume pụtara na Bible.
IHE BAỊBỤL Pụtara N'AHA MELANIE
Ihe aha Bible pụtara aha Melanie, gịnị ka Melanie pụtara ?.
Kedu ihe Pụtara ihe nnọchianya Wolf na Bible pụtara?
Anụ na -eri anụ, anụ ọhịa na anụ ọkụ (Aịz 11: 6; Hab 1: 8), nke na -achọ atụrụ igbu ha (Echo. 13:17; Jn. 10:12). Na -ehi ụra n'ụbọchị ma na -awagharị
Gịnị ka anụ ọhịa bea pụtara na nrọ na Akwụkwọ Nsọ?
Kedu ihe bea pụtara na nrọ n'akwụkwọ nsọ ?.
Gịnị Ka Ọ Pụtara Mgbe Nnụnụ Na -efụ Window Gị?
Kedu ihe ọ pụtara mgbe nnụnụ kụrụ mpio gị?. Ọtụtụ mgbe, ụmụ nnụnụ na -esi na windo na -ada, na -akpata ọgba aghara n'etiti ndị bi na ya. Ọtụtụ mgbe, ndị mmadụ
Ihe Akwụkwọ Nsọ pụtara gbasara mkpụrụ ego na nrọ
Ihe Akwụkwọ Nsọ pụtara maka mkpụrụ ego na nrọ. Ịrọ nrọ mkpụrụ ego na -anọchite anya mmetụta dị mma gbasara ike ma ọ bụ akụrụngwa ị nwere ike iji oge ọ bụla ịchọrọ. Ịchọpụta onwe gị na -amasị ihe bara uru
Kedu ihe Nọmba 5 Pụtara na Bible?
Gịnị ka nọmba 5 pụtara na Bible? Nọmba nke ise pụtara ugboro 318 n'ime Bible. Devid họọrọ nkume ise dị larịị mgbe ọ gara izute nnukwu onye iro ahụ
Ebee ka Akwụkwọ Nsọ kwuru na ọ nweghị mmehie karịrị nke ọzọ?
Ebee ka Akwụkwọ Nsọ kwuru na ọ nweghị mmehie karịrị ibe ya?
Pụtara Ime Mmụọ nke Ududo Na -agagharị na Gị
Ihe ime mmụọ pụtara nke ududo. Ududo na -eji nghọta dị oke egwu, imepụta ihe na ilekwasị anya nke ukwuu. Ejikọtara ya na ntụgharị uche dị ka ntụgharị uche
Nkọwa nke Akwụkwọ Nsọ Nrọ Banyere ime ọpụpụ
Nkọwa nrọ banyere ime ọpụpụ. Ịrọ nrọ maka ime ọpụpụ na -anọchite anya echiche ma ọ bụ atụmatụ na -agaghị nke ọma dịka a tụrụ anya ya. ndọghachi azụ, igbu oge, ma ọ bụ ndakpọ olileanya emebiwo atụmatụ gị
Ịma imi n'imi pụtara na Baịbụl
Ịkụ imi pụtara na Bible ?. Gịnị ka Bible na -ekwu gbasara ịkpọpu akụkụ ?. Bible ekwughị ọtụtụ ihe banyere ya. N'oge Bible, a na -eyikarị ọla ntị na mgbaaka imi
Gịnị bụ mkpa ugwu ugwu Caucasus n'ime Akwụkwọ Nsọ?
Ndị Armenia bụ ndị mbụ nabatara Iso Christianityzọ Kraịst dị ka okpukpe mba, site na ọdịnala na 301 AD Ala Armenia adịghị anya nke ukwuu, na mpaghara ala.
Gịnị Bụ Ihe Onye Ị Hụrụ n'Anya Pụtara na Bible?
Kedu ihe ọ pụtara na onye m hụrụ n'anya n'ime Baibul ?. N’ime Testament Ochie, a na -eji okwu a hụrụ n’anya eme ihe ugboro ugboro n’abụ nke abụ, dịka ndị lụrụ ọhụrụ na -egosipụta mmetụta miri emi ha nwere
Pụtara Akwụkwọ Nsọ nke Iju Mmiri na Nrọ
Nkọwa Bible banyere idei mmiri na nrọ.
Gịnị ka nla na -anọchi anya ya na Baịbụl?
Gịnị ka urukurubụba nọchiri anya ya na Baịbụl. Nru ububa abalị, na -emebi ihe (Job 13:28), (Mt 6:19), (Stg 5: 2), na -eri aji, ọka, akpụkpọ (Is 51: 8). Ndị